Oromoon akmitti jiraa Abiy Ahmed ( nafxanyaa) jalatti?Guyyaa 5 keessatti… – Kichuu
HomeNewsAfricaOromoon akmitti jiraa Abiy Ahmed ( nafxanyaa) jalatti?Guyyaa 5 keessatti…
Oromoon akmitti jiraa Abiy Ahmed ( nafxanyaa) jalatti??
Guyyaa 5 keessatti…
“Baankiin Daldala Itiyoophiyaa liqii sirra jiru birrii Mil.45 ammaaf ammatti kaffaltu malee jedhee hudhee naqabe. Gaafan Liqii Baankichaa kaffalu Ministeerri daldalaa buna yeroon hin gurgurre jechuun battalumatti dhufee Man-kuusaakoo Buna gabaa alaaf dhiyaatu mara waliin saamse. ECX seeraan ala buna bichisiifte jechuun hayyamnin bittaa fi dhiheessii bunaa irratti qabu battalumatti akka haqamu murteesse. Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee lafa Investimentiif naaf kenname irratti hin misoomsine jechuun na harkaa fudhate.
Ministeerri Galiiwwanii galii mootummaa birrii mil.30tu irra jira jechuun maallaqnin baankiitii qabu marti akka hin sochoone, baankonnis akka maallaqa naaf hin liqeessine baankota 16 biyyattii keessatti argaman maratti dhorkii barreesse. Kun hundi kan ta’e guyyaa 5 keessatti. Nan machaa’e, nan kufe. Kana qofaan hin dhaabbanne, Konkolaattota Marchadiisii 130 harkisa isaanii waliin na jalaa gurguran. Sibiilan alaa galchu toonii 300 ol buufata doonii Jibuutii irraa gaaffii tokko malee fe’anii gurguran. Maatii koo mana keessaa yaasanii mana jireenyaakoo Finfinnee Booleetti argamus gurguran. Maal taatan jedhee yoon gaafadhu Ÿebelay Akaaliitu nu ajaje jedhu”.
Osoo homaa narraa hin qabaatin nama kaappitaala Birrii Biiliyoona 4 sochoosu qullaatti na hanbisan. Lubbuu kootiif sodaadheen maatii koo waliin Ameerikaatti bade. Taaksii oofuu eegalus itti baruu hin dandeenye. Dhimmikoo har’as furmaata dhabee, qabeenyakoos dhabeen hojiin ala ta’ee jira” Mudannoo Obbo Mulunee Kakaa naaf qoodan keessaa kan fudhatame.” Yihun Engidatu Obbo Mulunaa Kaakaa dubbisee gabaase.
Yeroo amma kana Aanaa Guduruu,kombolchatti. Obboo Darajjee Dhaabaa,obboo Luluu Nagaraa,fi Obbo kabbadee Dhaabaa akkuma duraani ammas mana hidhaatti erga galfamanii guyyaa shanaffaa isaaniiti. Deggaraa ABO dha,Loltoota bosonaa(WBO) faana hariiroo qabdu jechuun mana hidhaatti galchani jiru.
Gazx…Obbo Geetaachoo! Akka Mootummaa Oromiyaatti SHANEEN eenyu
Geetaachoo… An Shaneen beeku !!
Ani banamuu isaatiillee miti,kan na gubu yoma ijoolleen oromo ufiin jettu,#YouTube San #subscribe gootee mallaqa waalitti qabdeef harkuma keenyaan nu arrabsitu qofan gubadha!
Guyyaa lamaan boodaa osoo dhaqxee laaltee ijoollee teenyatu warra irra #subscribe godha dhugaa rabbi
Kanatu nama guba akka abiddaa
Statues are under attack, and the debate over monuments to controversial figures of the past has been thrust into the limelight after the death of George Floyd.
More: https://t.co/EveEQhmAxI pic.twitter.com/1p2Yl0pxMh
— euronews (@euronews) June 11, 2020
Beheaded Christopher Columbus Statue In Boston Will Be Removed From North End Park – https://t.co/CwJS9tbTvt pic.twitter.com/DbYCdzMfVg
— Kichuu (@kichuu24) June 11, 2020
FILE PHOTO: Tennis – WTA Tour Finals
TOKYO (Reuters) – Naomi Osaka, the world’s highest paid sportswoman, says the voices of prominent athletes can be more influential than those of politicians and is determined that hers will be heard on the subject of racial injustice.
“Using humour is definitely one mechanism to expose these people … Calling them out for their ignorance and racism is also worthwhile sometimes.